IHibiscus Villa-Ubunewunewu, iimbono ezintle kunye nezitiya
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguMary
IHibiscus Villa likhaya elitsha elitofotofo (2009) elenzelwe ukonwabela ukuhlala kwiCaribbean ngaphakathi nangaphandle kwiGrenada ethandekayo, engonakaliswanga. I-villa iyilwe kakuhle kwaye ihonjiswe ngesitayela seTropiki kunye noyilo lwezakhiwo. Ngaphandle, i-villa ineendawo zokuhlala eziphangaleleyo kunye nephuli enkulu yetyuwa. Iimbono ezimangalisayo zolwandle, i-bay kunye neentaba zinokubonwa ngaphakathi nangaphandle. Iindwendwe zaseHibiscus Villa zingonwabela ukuhlala ngokukhululekileyo, kubunewunewu beCaribbean kwindawo yazo yabucala. Sizokuthatha kwisikhululo seenqwelomoya.
Umgangatho ophambili weHibiscus Villa unendawo yokuhlala enkulu, evulekileyo eneseti ezintathu zeengcango zaseFransi ezivulekele ithafa, evumela iindwendwe ukuba zonwabele iimbono ezintle ukusuka kwivilla. Njengoko i-hobby yomniniyo kukupheka kwegourmet, ikhitshi ebanzi ixhotyiswe kakuhle. Itafile yokutyela izihlalo ezisibhozo.
Kukho amagumbi amabini okulala, ngalinye linebhedi yenkosi kunye neengcango zaseFransi ezivulekele kumgangatho wayo ukuze wonwabele iimbono ezintle, nakwiziphelo ezichaseneyo zendlu ngasese. Igumbi lokulala lesithathu linebhedi enkulu. Onke amagumbi okulala amathathu anebhafu yabucala epheleleyo, ifeni yesilingi, kunye ne-ac, kwaye akumgangatho ophezulu ukusuka kwindawo yokuhlala-yabucala kwaye izolile. Ibhedi yosuku kunye ne-trundle kuphononongo ibonelela ngeebhedi ezongezelelweyo kubantwana abadala okanye abantu abadala abancinci.
IHibiscus Villa inendawo ebanzi yangaphandle yelitye elithandekayo lekorale enechibi elikhulu (32') elinetyuwa, zombini iindawo ezinelanga kunye nomthunzi, kunye nemfihlo kubamelwane. Ifakwe kakuhle ngefanitshala yeteak yangaphandle - itafile yokutyela emithandathu, izitulo ezine ezitofotofo, kunye neendawo zokuphumla ezintandathu. Kwiindawo ezingaphandle, iindwendwe ziyakwazi ukugcakamela ilanga, zifunde emthunzini, ziqubhe echibini, zitye, kwaye zibe nee-cocktails - lonke eli xesha zijonge iimbono ezintle zolwandle, i-bay kunye neentaba.
Imihlaba ihonjiswe kakuhle inezityalo ezidubulayo zetropikhi, amatyholo kunye nemithi, kubandakanya neentlobo zesundu ezisi-8.
IHibiscus Villa yeyona ndawo ifanelekileyo ukonwabela iholide elula, ekhululekileyo okanye njengesiseko sokubonwa ngokulula kwaye ukonwabele ubuhle obungonakali beGrenada.
IHibiscus Villa iseFort Jeudy, yenye yezona ndawo zintle zokuhlala eGrenada. Kuzolile, kunye netrafikhi encinci kakhulu yokuhamba kakuhle, kwaye kuphela i-10-20 imizuzu yokuqhuba kuyo nantoni na onokufuna ukuyenza (kunye nemizuzu eyi-15 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya).
Umphathi weNdlu yethu uya kubulisa iindwendwe ekufikeni kwaye azibonise ngeenxa zonke. Uyafumaneka ukuba aphendule imibuzo ngexesha lokuhlala kwabo kwaye aphathe nayiphi na imiba evelayo. Umgcini-ndlu wethu, uBeverly, uza kusasa kathathu ngeveki ukuze ancede ukugcina i-villa icocekile, kunye nokutshintsha kunye nokuhlamba iitawuli kunye namashiti.
Umphathi weNdlu yethu uya kubulisa iindwendwe ekufikeni kwaye azibonise ngeenxa zonke. Uyafumaneka ukuba aphendule imibuzo ngexesha lokuhlala kwabo kwaye aphathe nayiphi na imiba e…